မဝသေးဘူး – Grab Love Story
ကိုထွန်းလူတို့ မြို့တက်တိုင်း မစန်းစန်းနှင့် ပြူးကျယ်တို့က ချိန်းချိန်း လိုးနေကျ ဖြစ်သည်..။ အိမ်ချင်းကလည်း တောင်ဖက်မြောက်ဖက် ကပ်လျက်သားဆိုတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ဖြစ်နေကြသည်ကို မည်သူမျှ မရိပ်မိကြ..။ ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက် အသက်ချင်းကလည်း အလွန်ကွာသည်..။ ပြူးကျယ်အသက်က အခုမှ ၁၈ နှစ်ထဲ ဝင်စ..။ မစန်းစန်း အသက်က ၃၆ နှစ် ရှိပြီမို့ ပြူးကျယ်ထက် ၁၈ နှစ်ခန့် ကြီးသည်..။ လမွှေးလေးတွေ က ရေးတေးတေးပေါက်လာပြီ ဖြစ်၍ ပြူးကျယ်တစ်ယောက် လူပျို အတောင်အလက်လေးတွေ ထလာပြီ..။ လူပျိုကြီး ကိုမောင်ရှိန် သင်ကြားပြသထားသဖြင့် ဂွင်းလည်း တိုက်တတ်နေပြီ..။ ကိုမောင်ရှိန်က သူ့အဖေနှင့် ညီအစ်ကို တစ်ဝမ်းကွဲမို့ ဦးလေးဝမ်းကွဲ တော်စပ်သည်..။ သို့သော် ကိုမောင်ရှိန်က ပြူးကျယ်ကို သူငယ်ချင်းပေါင်း ပေါင်းသည်..။ မိန်းမ အကြောင်းတွေ ပြောပြသည်..။ ရွာထဲက လင်ငယ်နေ ၊နောက်မီးလင်းသော မိန်းမတွေကို ပြောပြသည်..။ ဘယ်မိန်းမမျိုးက တဏှာရာဂ ကြီးသည် ၊ စောက်ခေါင်း ဘယ်လောက်နက်သည် ၊ ကြာကြာလိုးမှ အားရသည် ၊ စသည်ဖြင့် တောထဲမှာ တွေ့တိုင်း ပြောပြသည်..။ သူ့အိမ်သွားလျင်လည်း ပြောသည်..။ “ မင်း…မိန်းမစောက်ဖုတ်လိုးရရင် ဒီထက် အဆတစ်ရာ သာတယ် မောင်…၊ ကြိုက်ကုန်းတွေ့ရင် ဆော်သာ ဆော်…” “ ကြိုက်ကုန်းဆိုတာ ဘာလဲ လေးရှိန်ရ…” “ မင်းကို သဘောကျတယ် ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အဲဒီမိန်းမက မင်းနားကို အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ လာလိမ့်မယ်..။
နောက် မင်းကို သူ့ကိုယ်တွင်း ပစ္စည်းတွေကို မမြင်မြင်အောင် တစ်နည်းနည်း နဲ့ ပြလိမ့်မယ်..၊ နောက်ပြီး မင်းကို စကားပြောရင်း ဖက်လှဲတကင်းနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးကြီး ခြေပုတ်လက်ပုတ် နဲ့ ဆက်ဆံလိမ့်မယ်..၊ ဒါတွေက အကုန်မဟုတ်သေးဘူး..။ ယေဘူယျ သဘောလောက်ပြောပြတာ..၊ နောက် ဒီထက် ပိုသိလာမယ်…၊ အေး…အဲလို အထာတွေပေးလာတဲ့ ဆော်ကြီးမျိုးကို ကြိုက်ကုန်းလို့ ယူဆပြီး တွယ်သာ တွယ်ပစ်ကွ….၊ ဘယ်တော့မှ ငြင်းမှာမဟုတ်ဘူး…” “ ဟင်….အဲလိုကြီးလား….မင်းတွေ့ထားပြီလား…ဟေ့ကောင်… .“ “ အော်…မတွေ့သေးပါဘူး….လေးရှိန်ရ… . ” ဒီနေ့….တောင်ဖက်က ကိုထွန်းလူတို့အိမ်ဖက် အလည်လာခဲ့သည်..။ ကိုထွန်းလူကြီး မြို့သွားရင် မှာစရာရှိတာလေး မှာရအောင် တွေးရင်း အသာလာခဲ့ရာ…။ အိမ်ရှေ့ ရောက်တော့ ဘာသံမျှ မကြားရပဲ တိတ်ဆိတ်နေသဖြင့် အသံမပြုတော့ပဲ..အိမ်ပေါ် အသာတက်လာခဲ့မိသည်..။ အိမ်ပေါ်ရောက်တော့လည်း ဘယ်သူမှ မတွေ့ရ..။ ဒါနဲ့ အိမ်အောက်ဆင်းပြီး နောက်ဖေးဖက်များ သွားသလား ဟုတွေးပြီး အိမ်နောက်ဖက် တိုးတိတ်စွာပဲ ပတ်လာခဲ့ရာ…ဟင်…..မစန်းစန်း ကြီး…ဒီမှာ လာပြီး သေးပေါက်နေတာကိုး..။ မြင်ရခဲလှသော မြင်ကွင်းမျိုးမို့ အာရုံစူးစိုက်မှု အပြည့်ဖြင့် ရှေ့ မှ မြင်ကွင်းကို ကြည့်နေမိသည်..။
မစန်းစန်းက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ အိမ်သာဘေး စည်းရိုးအနား၌ ထမီကို ခါးပေါ်လုံးစုတင်၍ ထိုင်ကာ သေးစင်အောင် ညှစ်နေသည်ကိုပါ အနီးကပ် မြင်နေရသည် ဖြစ်ရာ ပြူးကျယ် လီးတန်ကြီးမှာ ဒင်းခနဲ ဒင်းခနဲ ကြွတက်တောင်မတ်လာသည်..။ ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီး အရင်းရှိ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ အလွန်ကြီးမားလှသည်..။ အမှန်တကယ်တော့ မစန်းစန်းတစ်ယောက် ယောက်ျားနှင့် မလိုးရသည်မှာ ၅ ရက်ခန့် ရှိပြီမို့ အလိုးခံချင်စိတ်တွေ ပြင်းထန်ထကြွလာသည့်အတွက် မီးဖိုချောင်ထဲ ထမင်းအိုး တည်ရင်း ခရမ်းသီးနှင့် အာသာဖြေလာခြင်း ဖြစ်သည်..။ ထို့ကြောင့်ပင် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်လွှာက ဘေးသို့လန်ထွက်နေပြီး ခပ်ဟဟကြီး ပြဲနေခြင်း ဖြစ်သည်..။ ပြူးကျယ် သူ့ပေါင်ကြားက လီးမှာ အရှည် ရှစ်လက်မ ၊ လုံးပတ် ၆ လက်မခန့် ရှိသည်..။ သည်တော့ လူငယ်သလောက် လီးက အလွန့်အလွန် စံချိန်မှီနေပါတော့သည်..။ ဂွင်းတိုက်တတ်နေပြီ ဖြစ်၍ လီးက ဒစ်လန်နေသည်..။ ပြူးကျယ်တစ်ယောက် မစန်းစန်း စောက်ဖုတ်ကြီးကို လိုးရန် အကြံထုတ်နေပါသည်..။ လီးအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိထားတဲ့ အအိုတွေက စရတာ ပိုလွယ်ဆိုပဲ…။ သေးပေါက်ပြီးသည့်တိုင် မစန်းစန်းက မထသေးပဲ သူ့လက်ဝါးနှင့် စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပွတ်နေသေးသည်..။ ပြီးတော့ သူ့လက်ခလယ်ကို စောက်ပေါက် အခေါင်းထဲ ထိုးပြီး သွင်းလိုက်နှုတ်လိုက် လုပ်နေသည်..။ ပြူးကျယ်စိတ်ထဲ ယောက်ျားတွေက လီးကို လက်နှင့် ဆုတ်၍ ဂွင်းတိုက်သလို မိန်းမတွေကလည်း လက်ချောင်းထိုး၍ အာသာဖြေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်လိုက်သည်..။ သေချာပြီ…မစန်းစန်း တစ်ယောက် အလိုးခံချင်၍ စောက်ပတ်ရွလို့ သာ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်မည်..။
ဤအချိန်မျိုး လိုးလိုက်ရလျင် မခံမရှိ..။ မကြိုက်မရှိ ၊ မကုန်း မရှိ…။ မစန်းစန်း လက်အသွင်းအထုတ်က တဖြည်းဖြည်း သွက်လက်လာသည်..။ အသံတွေပင် ထွက်လာသည်..။ “ ပြွတ်….ပြွတ်……ပြွတ်…….” “ ပြွတ်…ပွတ်…ဗြစ်….အား…..အင်း……. အား….” ပြူးကျယ် ချောင်းကြည့်နေရာမှ အားမရ၍ ရှေ့သို့ ထပ်တိုးမိသည်..။ မစန်းစန်းကတော့ နှိုက်လို့ ကောင်းတုန်း ဆွလို့ကောင်းတုန်း ရှိနေသည်..။ ဖီလင်တက်နေပြီး ဖြစ်၍ ဖင်ကြီးနှစ်လုံးမှာ ကားလိုက် ကြုံ့လိုက်ဖြင့် လှုပ်ခတ်နေသည်..။ ပြူးကျယ်က ၃ ပေလောက် အကွာခန့်မှ ရပ်ကြည့်နေရင်း ချောင်းဟန့်လိုက်သည်..။ “ အဟမ်း…..ဟမ်း…..” ချောင်းဟန့်သံ ကြား၍ မစန်းစန်း ဆတ်ခနဲတုန်သွားကာ နောက်လှည့်ကြည့်ပြီး အနှုတ်အသွင်း လုပ်နေသော လက်ခလယ်ကို ဆွဲနှုတ်လိုက်သည်..။ “ အယ်………ကိုယ့်မေကိုလိုးလေး….. ဘာလာ လုပ်တာလဲ ဟင်…..” ပြူးကျယ်မှန်း သိသွားသောအခါ မစန်းစန်းက ထမီကို ဆွဲဖုံးပစ်လိုက်ရင်း ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ် ဆဲသည်..။ “ ဟို…ဟို…..ပေသီး….ဝင်သွားလို့…. လာယူတာ..ပါ…….မမ….” ပြူးကျယ်…မစန်းစန်း ဘေး၌ ပေသီးတွေ့ရ၍ မစန်းစန်း၏ ညာဖက်ခြေဖဝါးနှင့် တစ်ထွာခန့် အကွာတွင် ရှိနေသော ပေသီးကို လက်ညှိုးထိုးပြရင်း ရွှီးလိုက်ရသည်..။ မစန်းစန်းက ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ပေသီးကို တွေ့ရသည်..။ စောစောက စိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့် ပေသီးနှင့် ထုလိုက်မည် စိတ်ကူးရာမှ အကြံတစ်မျိုး ဝင်လာသည်ဖြစ်၍ မထုတော့ပဲ ပေသီးကို ကောက်ယူလိုက်သည်..။ ပြူးကျယ် တစ်ယောက် လူပျိုကောင် ဝင်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ခုမှ မစန်းစန်း သိလိုက်ရသည်..။ ဒီအရွယ်သည် အရူးအမဲသား ကျွေးသလို နွားသိုးကြိုးပြတ် အငမ်းမရ ဖြစ်တတ်ကြောင်း ကောင်းကောင်းကြီး သိထားရကား မစန်းစန်းက မတ်တတ်ရပ်၍ ထမီကို တိုတို ဝတ်လိုက်ပြီး….. “ ဟေ့ကောင်….မှန်မှန်ပြော..နင် ဘယ်တုန်းက အိမ်ဘေး ရောက်နေတာလဲ…” “ မကြာသေးပါဘူး..မမ…..”
“ မလိမ်နဲ့နော်…ငါလူကြီး တိုင်မှာ…ဘာမှတ်နေလဲ.။ “ နင် ဘယ်တုန်းက ရောက်နေတာလဲ….မှန်မှန်ပြော…စမ်း …..” “ ဟို..ဟို………မမ သေးပေါက်ပြီးကာစ …ကတည်းက ရောက်နေတာပါ….မမ ဟိုဒင်း…လုပ်နေတော့ မယူရဲလို့ စောင့်နေတာပါ….” ပြောရင်းဆိုရင်း မစန်းစန်း စောက်ဖုတ် ဖောင်းဖောင်းပြဲပြဲကြီးကို ပြန်မြင်လာ၍ သူ့ပေါင်ကြားက လီးကြီးမှာ မာကြောတင်းတောင့်လာသည်..။ “ ဟင်….ကြည့်ကောင်းနေတယ်ပေါ့…ငါလု ပ်နေတာတွေ အကုန်မြင်တယ်ပေါ့….” “ ဟုတ်……..ဟုတ်ကဲ့…မြင်…မြင်ပါတယ် …” “ မိန်းမ စောက်ဖုတ်မြင်ရင် လိုးရတယ်…၊ မလိုးရင် တစ်သက်လုံး မိန်းမ မရဘူး…သိလား…….” “ ဟုတ်….ဟုတ်ကဲ့…” “ ငါ့ လိုးပေးမှာလား..” “ ဟုတ်….ဟုတ်ကဲ့……” “ ပြစမ်း….မင်းလီးက ဘယ်လောက်ကြီးလဲ…လို့….” မစန်းစန်းက ပြောပြောဆိုဆို ပြူးကျယ် ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်..။ ပေါင်ကြားက ငေါက်ခနဲ ငေါက်ခနဲ တောင်မတ်နေသည့် လီးကြီးကို မြင်လိုက်ရသောအခါ မစန်းစန်း ပါးစပ်ဟကာ အံ့သြသွားသည်..။ ပြူးကျယ် လီးက သူမ ယောက်ျားလီးထက် ကြီးနေပါရောလား…။ သူမ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲမှလည်း လှိုက်ခနဲ ကြွတက်သွားသည်..။ “ မင်း…မိန်းမ လိုးဖူးလား…” “ မ..မ…မလိုးဖူးသေးဘူး….” “ မလိမ် နဲ့နော်..” “ ဟုတ်…ဟုတ်…..မ…..မလိမ်ပါဘူး…….” “ လာ…..အပေါ်ထပ် လိုက်ခဲ့…..” မစန်းစန်းက သူ့လက်ကို ခပ်တင်းတင်း ဆွဲပြီး အပေါ်ထပ် ခေါ်သည်..။ ပြူးကျယ်လည်း ကပျာကယာ ပုဆိုးကောက်ဝတ်လျက် မစန်းစန်း နောက်သို့ ပါလာသည်..။
မစန်းစန်းက အိမ်ပေါ်ထပ် အနောက်ခန်းထဲ ခေါ်လာသည်..။ အနောက်ခန်းထဲ ရောက်သောအခါ မစန်းစန်းက ထမီကို ကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်ပြီး ..ပြူးကျယ်ပုဆိုးကိုလည်း ဆတ်ခနဲ ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်..။ ၂ ပေခန့် မြင့်သော ကျွန်းသေတ္တာကြီးပေါ် တစောင်းထိုင်ရင်း ပေါင်တန်ကြီးနှစ်ချောင်းကို ဖြဲကား၍ ထားလိုက်သည်..။ ကျွန်းသေတ္တာကြီးက အမြင့် ၂ ပေ ၊ အလျား ၃ ပေ ၊ အနံ ၂ပေ ခွဲမို့ အတော်လေး ကျယ်ဝန်းသည်..။ မစန်းစန်းက ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သေတ္တာစောင်းတွင် မတင်လိုက်ပြီး ပေါင်ကို ခပ်ကားကားလေး ဖြဲထားသည်..။ “ အင့်..ဒီမယ်…ငါ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို သေချာကြည့်…….” ပြူးကျယ်က ပေါင်နှစ်လုံးကြား ၊ စောက်ဖုတ်တည့်တည့်တွင် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်သည်..။ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးက လက်တစ်ဝါးစာမက ခုံးခုံးဖောင်းဖောင်းကြီး ဟနေသည်.။ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားထူထူကြီးေ တွက အညိုရောင်သန်းနေပြီး အတွင်းသားနုနုတွေက နီရဲနေသည်..။ စောက်ရေတွေကလည်း စိုရွှဲနေသဖြင့် အရောင်တွေ တလက်လက် တောက်လို့နေသည်..။ ဆီးခုံဝင်းဝင်းကြီးအောက်တွင် စောက်မွှေးတွေက မဲချိတ်နေပြီး ရှုတ်ရှက်ခတ် တွန့်လိမ်နေသည်..။ စောက်ဖုတ်ကြီးက ဟစိဟစိ ဖြစ်နေရာ ပြူးကျယ်မှာ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း လိုးချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်လို့လာသည်..။ “ စောက်ဖုတ် အပေါက်တွေ့ရဲ့လား….” “ ဟင့်အင်း…မတွေ့ဖူး….” “ ဖင်ဝနဲ့ နီးနီးလေးရယ်..လက်ခလယ်နဲ့ ထိုးကြည့်လေ….” ပြူးကျယ်က စူဝင်းတင်းဖောင်းနေသော ဖင်ဝမှ စ၍ သူ့လက်ခလယ်ထိပ်ကို အထက်သို့ ဆွဲပွတ်လိုက်ရာ စွပ်ခနဲ စောက်ဖုတ်ထဲ နစ်ဝင်သွားသည်..။ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေက နွေးထွေး နူးညံ့နေသည်..။
ပေါင်ကြားထဲရှိ သူ့လီးကြီးမှာ အရေပြားတွေ ကွဲထွက်မတတ် တောင်မတ်လာသည်..။ “ ကဲ………မတ်တတ်ရပ်လိုက်တော့….” ပြူးကျယ် မတ်တတ်ရပ်လိုက်သည်..။ မစန်းစန်းက သူ့ကျောပြင်ကို ကျွန်းသေတ္တာကြီးပေါ် လှဲချလိုက်ပြီး ဒူးနှစ်ချောင်းကို ထောင်၍ ပေါင်တန် တုတ်တုတ်ကြီးနှစ်ချောင်းကို အနည်းငယ် ကားပေးလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ သူမ ဖင်ဆုံထွားထွား အိအိကြီးကို သေတ္တာအစွန်းထိ ရောက်အောင် တွန်းရွှေ့လိုက်သည်..။ “ လာ…ရှေ့နား…နည်းနည်းတိုးပြီး မင်းလီးကြီးနဲ့ မမ စောက်ဖုတ်ထဲကို အဆုံးထိ ဝင်အောင် ထိုးသွင်းလိုက်…..” ပြူးကျယ်က ရှေ့တိုးလိုက်ပြီး သူ့လီးကြီးကို လက်နဲ့ ဆကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲ အရှိန်နှင့် ထိုးသွင်းလိုက်သည်..။ အပေါက်ထဲ မထိုးမိပဲ စောက်ဖုတ် အက်ကွဲကြောင်းအတွင်း မြောင်းအတိုင်း အထက်သို့ ချော်ထွက်သွားသည်..။ လီးထိပ်ဆံကြီးနှင့် စောက်စိငုတ်ပြူးပြူးကြီးတို့ ပွတ်တိုက်မိသွားရာ ပူခနဲ ရှိန်းခနဲ အီဆိမ့်သွားပြီး မစန်းစန်း ဖင်ဆုံကြီးက ဆတ်ခနဲ ကော့တက်သွားသည်..။ ကောင်းလိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း ၊ တစ်ကိုယ်လုံး မီးပွင့်သွားသလား ထင်မှတ်ရသည်..။ ပြူးကျယ်က စောက်ဖုတ် အက်ကွဲကြောင်း အသားနု မြောင်းကြီးအတိုင်းပင် သူ့လီးထိပ်ဆံကြီးဖြင့် ပွတ်၍ အောက်သို့ ဆွဲချလိုက်ပြန်သည်..။ သည်တော့မှ စောက်ခေါင်းနွေးနွေးကြီးထဲသို့ ပြွတ်ခနဲ ဝင်သွားသည်..။ စောစောက မီးဖိုခန်းထဲတွင် ထိုးသွင်းခဲ့သော ခရမ်းသီးထက်ပင် ပြူးကျယ်လီးကြီးက ကြီးနေသည်ဖြစ်၍ အင့်ခနဲ အသံထွက်သွားသည်..။ ဒစ်ဆံပြဲပြဲ အသားနုခဲကြီးက ပူနွေးနေသဖြင့် ခရမ်းသီးနှင့် ဘာမှ မဆိုင် ၊ ကြံရာမရလို့သာ ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်သည်..။
“ အင်း……ကျွတ် ကျွတ်…မင်းလီးကြီးကို အဆုံးထိ ရောက်အောင် ထိုးလိုက်တော့…၊ ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးနော် မင်းလီးကြီးက ကြီးတော့ တအားဆောင့်ထိုးရင် စောက်ဖုတ်အတွင်းက အသားနုတွေ ပွန်းပဲ့ကုန်လိမ့်မယ်….” “ ဟုတ်ကဲ့….မမ..” ပြူးကျယ်က မစန်းစန်း ပြောသည့်အတိုင်း သူ့လီးကြီးကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးသွင်းလိုက်သည်.။ “ ဗြစ်…ဗြစ်…..ဖွတ်….ဗြစ်..အား…. ကျွတ်ကျွတ်….အား….ဟင်း ဟင်း…..” လီးကြီးက စီးစီးပိုင်ပိုင် တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြင့် စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ ဝင်သွားသည်..။ ဆီးခုံချင်း ထိကပ်သွားသည်..။ နှစ်ဦးသား သူ့အငွေ့ ကိုယ့်အငွေ့ဖြင့် အရသာတွေ့နေကြသည်..။ မစန်းစန်း တစ်ယောက် အသိနောက်ကျလိုက်လေခြင်း ဟု ယူကြုံးမရ ဖြစ်နေသည်..။ သူမ စောက်ဖုတ်ကြီးတစ်ခုလုံး ခုံးထဖောင်းကြွလာပြီး အတွင်းထဲမှ လှိုက်၍ လှိုက်၍ ယားတက်လာသည်..။ “ မင်း….မင်း…ခွေးလိုးတာ မြင်ဖူးလား..” မစန်းစန်း ကတုံကရင် လှိုက်မောသော အသံကြီးဖြင့် မေးလိုက်သည်..။ “ အေး…..အေး…အဲဒီ ခွေးဆောင့်သလို မမကို ဆောင့်ပေးနော်..မနားနဲ့သိလား….. ” “ ဟုတ်ကဲ့ပါ…ဆောင့်ရတော့မလား….” “ နေ….နေအုံး…လေ…လီးကြီးကို တဝက်လောက် ပြန်နှုတ်ပြီး ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လေး သွင်းလိုက် နှုတ်လိုက် လုပ်အုံး…” ပြူးကျယ်က မစန်းစန်း ပြောသည့်အတိုင်း လီးကြီးကို တဝက်ကျော်ကျော် နှုတ်လိုက် တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်သွင်းလိုက် လုပ်ပေးသည်..။ ကောင်းလွန်းလှသဖြင့် မစန်းစန်းမှာ မျက်လုံး စုံမှိတ်ပြီး ပါးစပ်ကြီးဟကာ မှိန်းခံနေပါသည်..။ “ အေး…..ရပြီ ဆောင့်……ဆောင့်တော့….” သည်တော့မှ ပြူးကျယ်တစ်ယောက် နွားသိုးကြိုးပြတ် ဒလဟော ဆောင့်ဆောင့်လိုးပါတော့သည်..။ “ ဖွတ်…ဖွတ်..ဗြွတ်…..အမေ့… အမယ်လေး…..အီး .အင့်…အား..ဟင်း….အမေ့.အား အင့်.အင့်.ရှီး….ကျွတ်…..” မစန်းစန်း နှုတ်ဖျားက အသံမျိုးစုံ ထွက်ပေါ်လာသည်..။ ပြူးကျယ်၏ အားမာန်ပါသော ဆောင့်ချက်နှင့် အညီ သူမ ဖင်ဆုံထွားထွားကြီးကို ကော့၍ ကော့၍ ပစ်ပစ်ခံသည်..။ နှစ်ဦးလုံး ကာမအရသာတွေက မီးပွင့်မတတ် ကောင်းလွန်းလှသည်..။
လီးနှင့် ပြတ်၍ လီးငတ်နေသော မစန်းစန်းတစ်ယောက် မီးကုန်ယမ်းကုန် ကော့ကော့ ခံနေသလို အခုမှ စောက်ဖုတ်လိုးဖူးသော လူပျိုသိုး ပြူးကျယ်ကလည်း ကျားရိုင်းတစ်ကောင်အလား ရာဂမာန်တွေ တဖွားဖွားထလျက် တအားကုန် ကြုံးကြုံး၍ ဆောင့်သည်..။ “ စွပ်….ဖွတ်…ဖွတ်..ပြွတ်….ဘွတ် …ဖွတ်……အီး …အင့်….အမေ့..အားလားလား…ကျွတ် ကျွတ်….အမေ့…အင့်….အား….ကျွတ် ကျွတ်…အ…ရှီး…အမေ့..ဆောင့်..ေ ဆာင့် ကောင်း….ကောင်း လိုက်တာကွယ်..” မစန်းစန်း ခြေထောက်နှစ်ချောင်းက ပြူးကျယ်၏ ခါးကို တင်းကျပ်နေအောင် ချိတ်၍ ဖင်ကြောကြီးတွေ ရှုံ့ခွက်လာပြီး အီးခနဲ အသံကြီးထွက်ကာ စောက်ရေပူတွေကို ဗြင်းခနဲ ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်..။ လက်နှစ်ဖက်ကလည်း ပြူးကျယ်၏ ကျောပြင်ကြီးကို တင်းနေအောင် ဖက်ထားရာ ပြူးကျယ်မှာ ကုန်းကုန်းကြီး ဆောင့်နေရတော့သည်..။ စောစောကလို ဆောင့်အားမကောင်းတော့သော်လည်း ဖင်ကြောကြီးကို ညှစ်ညှစ်ပြီး ပင့်ပင့်ဆောင့်ထည့်လိုက်ရာ ဆယ်ချက်ခန့် အရောက်တွင် သူ့လချောင်းတစ်ခုလုံး ပူရှိန်း ကျင်ဆိမ့်သွားပြီး လရေပူတွေကို အရှိန်နှင့် ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်..။ မစန်းစန်း စောက်ဖုတ်အတွင်း ကြွက်သားတွေက ပြူးကျယ်လီးတန်ကြီးကို ညှစ်ညှစ်ပေးရာ ဒစ်ဆံပြဲပြဲကြီး တဝိုက်တွင် အီဆိမ့်နေပါတော့သည်..။ နှစ်ယောက်သား ခေတ္တ မှိန်းနေလိုက်ကြသည်..။ ကလေးနှစ်ယောက်က ကျောင်းဆင်းလျင် သူတို့အမေကြီး ( မစန်းစန်းအမေ ) အိမ်တွင် ထမင်းဝင်စားပြီး ကျူရှင် ဆက်တက်ကြသည်မို့ နောက်တစ်ချီလောက် အလိုးခံ၍ ရသေးသည်..။ သူ့ယောက်ျား ကိုထွန်းလူသာဆိုလျင် ယခုလောက်လိုးပြီးလျင် အမောဆို့၍ ပက်လက်လန် ဖလက်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်..။ လီးမှာလည်း သာခွေယိုင် ဖြစ်သွားတတ်သည်..။ ပြူးကျယ်မှာကား ထိုသို့မဟုတ် ၊ လရေတွေ ထွက်သွားသည့်တိုင် လီးကြီးက မာန်ဟုန်မကျသေးပဲ တင်းမာနေဆဲ ဖြစ်သည်..။ “ ကောင်းလိုက်တာ..မောင်လေးရယ်…မင်း..ရော ကောင်းရဲ့လား…ဟင်…” မစန်းစန်း အသံက စောစောကလို ထန်မနေတော့ပဲ ကြင်နာဟန်တွေ အပြည့်ဖြင့် နွမ်းလျစွာ မေးလိုက်သည်..။
“ ကောင်းတယ် မမ….တအားကို ကောင်းတာပဲ..” “ နောက်တစ်ချီလောက် လိုးနိုင်သေးလား ဟင်..” “ ဟာ….မမကလဲ အထင်သေးလိုက်တာ…ဆယ်ချီတောင် လိုးနိုင်သေးတယ်…” မစန်းစန်းက ပြူးကျယ် ပင်ပန်းနေမည် စိုး၍ စေတနာနှင့် မေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်..။ ဒါကို ပြူးကျယ်က ယောက်ျားမာန်ဖြင့် မခံချင်စွာ တုံ့ပြန်လိုက်သည်.။ “ မမက…မောင်လေး ပင်ပန်းသွားမှာ စိုးလို့ပါ…” မစန်းစန်းက လေပြေထိုး၍ ချော့သံနှောကာ ပြောလိုက်ရသည်..။ “ အခု မမစောက်ဖုတ်ထဲမှာ ကျနော့်လီးကြီး မာနေတုန်းပဲ မဟုတ်လား…” “ အင်း….အင်း…ဟုတ်ပါတယ်….” “ ဒါများ မမရာ…မမခံနိုင်သလောက် ကျနော် လိုးပေးမယ်….စိတ်ချ…..” မစန်းစန်းက ပြူးကျယ် ပြောပေါက်ကို အလွန် သဘောကျသွားကာ ဖက်ထားရာမှ ပြူးကျယ် မျက်နှာကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ယူလိုက်သည်..။ ဆိုးဆေးမပါ ပကတိ သွေးသားဖြင့် နီရဲနွေးထွေးသော မိန်းမတစ်ယောက် နှုတ်ခမ်းဖြင့် ပထမဆုံး အစုတ်ခံလိုက်ရခြင်းမို့ ပြူးကျယ်လီးတန်ကြီးက တင်းခနဲ တောင်မတ်သွားသည်..။ ဤသည်ကို မစန်းစန်းက သိရှိလိုက်ရာ ကျေနပ်စွာ ပြုံးလိုက်သည်..။ အခုတစ်ချီလိုးပြီးလျင် ညပါ ဆက်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်..။ “ ကဲ….မောင်လေး…နောက်တစ်မျိုး လိုးရအောင် မင်းလီးကြီးကို ဆွဲနှုတ်လိုက်ပါအုံး….နော်….” ပြူးကျယ်က သူ့လီးကြီးကို ဆွဲနှုတ်လိုက်ရာ မာန်ဟုန်မကျသေးသော လီးတန်ကြီးက ဗလွတ် ဖွတ်..ပြွတ်…ဟူသော အသံပေးလျက် စောက်ဖုတ်ကြီးထဲမှ ထွက်လာသည်..။ အကြောပြိုင်းပြိုင်းထကာ တောင့်တင်းနေသော လီးတန်ကြီး ပတ်လည်တွင် ကာမအရေတွေ စိုရွှဲလက်ထနေသည်..။ မစန်းစန်းက ပက်လက်အိပ်နေရာမှ လက်ထောက် ထလိုက်သည်..။
ထို့နောက် အရေတွေ စိုရွှဲနေသော ပြူးကျယ်၏ လီးတန်ကြီးကို နှစ်သက်စွာ ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်..။ “ မမတော့ မင်းလီးကြီးကို စွဲသွားပြီ ကွယ်…. နောက်လဲ…လိုးပေးနော်…မောင်လေး…. ” “ ကျနော်ကလဲ မမစောက်ဖုတ်ကြီးကို စွဲသွားပါပြီ…ဒီမယ် ကြည့်ပါလား…ဆက်လိုးချင်လို့ တောင်းဆိုနေတာ…….” ပြူးကျယ်က ကိုယ်ကို နောက်သို့ ဆုတ်၍ သူ့ခါးကို ကော့လိုက်ပြီး ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ တောင်တောင်ပြသည်..။ ဒစ်ဆံနီနီကြီးက ပြဲပြဲတက်လာပြီး သွေးကြောကြီးတွေ ဖောင်းကြွလာသည်..။ သည်ကောင်လေး လူငယ်သလောက် လီးကြီး သည်မျှလောက် ကြီးထွားလှသည်ကို မစန်းစန်းတစ်ယောက် အံ့သြ သဘောကျလျက် ရှိပါတော့သည်..။ “ ကဲ…ဒီတစ်ခါ မမက ဒီသေတ္တာပေါ်မှာ လက်ထောက်ပြီး ဖင်ကုန်းပေးထားမယ် မင်းက မမနောက်ကနေ လိုးပေးနော်…၊ အဟင်းဟင်း…ခွေးတွေ လိုးသလိုပေါ့…မင်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ မမခါးကို ခပ်တင်းတင်း ဆုတ်ကိုင်ပြီး အသားကုန် ဆောင့်လိုးပေး…ကြားလား……” ပြူးကျယ်တစ်ယောက် မိန်းမတစ်ယောက်ကို ရှေ့ကလည်း လိုးလို့ရ ၊ နောက်ကလည်း လိုးလို့ရသည်ကို အံ့သြနေမိသည်..။ အံ့သြစိတ်ကြောင့် ပြုံးလိုက်မိသည်..။ ထိုအပြုံးကို မစန်းစန်းက မြင်တွေ့သွားရာ… “ မင်းက…..ဘာပြုံးတာလဲ….ဟွန့်….” “ သဘောကျလို့ပါ….မမရဲ့……” “ ဘယ်လိုရှင့်….ကိုယ်တော်လေး…..” “ အော်…ဒီလိုပါ မမရာ..စောက်ဖုတ်ဆိုတာ ရှေ့ကလဲ လိုးလို့ရ ၊ နောက်ကလဲ လိုးလို့ရတာကို သဘောကျလို့ပါ…အဟင်း..ဟင်း….” “ အမယ်…ရှေ့နောက်တင် ဘယ်ကမလဲ..ငါ့မောင်ရဲ့…ဘေးတစောင်းပါ လိုးလို့ ရသေးတယ် ရှင့်…သိလား..၊ မမ သေချာ ပြပေးမယ်..ဒါမှ ငါ့မောင် အလိုးပါရဂူ ကြီးဖြစ်မှာ…ဟင်း ဟင်း…..” မစန်းစန်းက သေတ္တာပေါ်က ဆင်းလိုက်ပြီး ကျွန်းသေတ္တာကြီးပေါ် တတောင်နှင့် ထောက်ကာ ခါးကို ညွှတ်လျက် ဖင်ထောင်ကုန်းပေးလိုက်သည်..။ ခါးကို ညွှတ်ချထားသည်ဖြစ်၍ ဖင်အိုးကြီးနှစ်မွှာက ဝင်းပြောင်လျက်ရှိပြီး အထက်သို့ စွင့်စွင့်ကြီး ကော့လျက် ဝင့်ဝင့်ထည်ထည်ကြီး ဖြစ်နေပါတော့သည်..။ ပေါင်ရင်းရှိ စောက်ဖုတ်ကြီးက နောက်သို့ ပြူးထွက်နေသည်..။
ပြူးကျယ်က သူ့လီးတန် နွေးနွေးကြီးကို စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်း နွေးနွေးကြီးနှင့် ဖိကပ်ထားလိုက်ပြီး ဝင်းပြောင်လက်ကားလျက်ရှိသော ဖင်အိုးထွားထွားကြီးကို လက်ဝါးနှင့် စုံချီဆန်ချီ ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်…။ စာသာ မတတ်လျင်ရှိမည် ၊ ကာမအတတ်ကိုကား တစ်ထွာပြလျင် လေးငါးတောင် မြင်ပြီး တတ်ပြီးသားမို့ ပြူးကျယ် လက်တွေက အလှမ်းကျယ် ခြေဆန့်ကာ နို့အုံကြီးနှစ်လုံးသို့ တိုင် ရောက်ရှိသွားသည်..။ အပေါ်အင်္ကျီ မချွတ်သော်လည်း ကျယ်သီးများနှင့် ဘရာစီယာ ချိတ်ကိုပါ ဖြုတ်ထားပြီးသားမို့ နုထွတ်တင်းအိနေသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို စိတ်ရှိလက်ရှိ အားပါးတရ ဆုတ်ချေပေးလိုက်သည်..။ ကာမလှိုင်းကို လှုပ်ရှား ထကြွစေရာတွင် နို့အုံတဝိုက်ရှိ အကြောများကလည်း အရေးပါစွာ အရာရောက်လှသည်မို့ နို့အုံကြီးကို ဆုတ်ချေပေးလိုက်သည်နှင့် မစန်းစန်း တစ်ကိုယ်လုံးရှိ ရမ္မက်သွေးများ ဆူကြွလာသည်..။ စောက်ဖုတ်အုံကြီးအတွင်း လှိုက်လှိုက်ပြီး တက်လာသည်..။ ဖင်သားတွေပါ တဆတ်ဆတ် တုံခါလာသည်..။ “ မောင်လေးရယ်….မမ ခံချင်လာပြီကွာ….လိုးတော့နော်…… ” ပြူးကျယ်က သူ့လီးကြီးကို လက်နှင့် အသေအချာ ဆုပ်ကိုင်၍ ဖောင်းကြွနေသော စောက်ဖုတ်အဝတွင် တေ့ကာ ထက်အောက်ဝဲယာ ထိုးမွှေလိုက်သည်..။
“ ပြစ်……ဗြိ…ပြွတ်…ပြစ်………ပလစ်….” စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ရွဟနေပြီး စောက်ရေတွေကပါ အိုင်ထွန်းနေသဖြင့် လှည့်ပတ်မွှေနှောက်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်တည်း အသံတွေ ထွက်လာပါသည်..။ မစန်းစန်း၏ ဝင်းပြောင်တင်းကားနေသော ဖင်အိုးကြီးနှစ်လုံးမှာ ရမ်းခါနေပါတော့သည်..။ ပြူးကျယ်က သူ့လီးကြီးကို အဆုံးထိ အကုန်ဝင်အောင် မသွင်းသေးပဲ ၃ လက်မခန့်လောက်သာ မြုပ်သွင်းပြီး အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးသည်..။ ပြဲကားနေသော ဒစ်ဆံကြီးနှင့် ဒစ်ဆံကြီး အရင်းတွင် စုလိပ်နေသော အရေဖျား အရစ်ဝိုင်းကြီးက လီးတန်ကြီးကို စုတ်မျိုလျက်ရှိသော စောက်ဖုတ်အတွင်းသားများကို မထိတထိနှင့် ဆွပေးသလို ဖြစ်ကာ မစန်းစန်း စိတ်ထဲ မရိုးမရွကြီး ဖြစ်လာကာ ခံချင်စိတ်တွေ အလွန့်အလွန် ပြင်းထန်လို့ လာပါတော့သည်..။ သူမ ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ အားနှင့် ကော့ထည့်လိုက်ရာ လီးကြီးက အရှိန်နှင့် တိုးဝင်လာပြီး သားအိမ်ဝတွင် ဒုတ်ခနဲ ဝင်ဆောင့်ပါတော့သည်..။ နှစ်ယောက်လုံး မီးပွင့်မတတ် အီဆောင့်သွားသည်..။ “ မမ…ဘာကြီးနဲ့ ဆောင့်မိတာလဲဟင်…လီးထိပ်ကြီးကို ပူရှိန်း ဆိမ့်တက်သွားတာပဲ..” မစန်းစန်း တစ်ယောက်လည်း ပြူးကျယ်နည်းတူ ခံစားလိုက်ရသည်မို့ တော်တော်နှင့် မဖြေနိုင်ပဲ ဖြစ်နေသည်..။ ပြီးမှ ဟင်းခနဲ လေပူကြီးတစ်ချက် မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီး…. “ သားအိမ်နဲ့ ဆောင့်မိတာ…မောင်လေးရဲ့ ..နာလည်း နာ ကောင်းလဲကောင်းကြီး နော်…” ပြီးပါပြီ